2021 IWCA Ukusebenzisana @ CCCC - I-International Writing Centers Association
Usuku: NgoLwesithathu, Ephreli 7, 2021 kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-4: 15 PM
Uhlelo: Sicela ubheke ifayela le- Uhlelo Lokusebenzisana Lwe-2021 IWCA Online ukuthola imininingwane ngamaseshini ngamanye.
Imodi: Izikhathi zokuvumelanisa ze-Zoom namavidiyo we-Asynchronous. Ukuze uthole imihlahlandlela yokwakha iphrezentheshini ebukhoma noma ye-asynchronous, bona i- Umhlahlandlela Wokufinyelela Komethuli We-Remote we-IWCA.
Ukubhalisa: $ 15 kubachwepheshe; $ 5 yabafundi. Vakashela iwcamembers.org ukubhalisa.
Uma ungelona ilungu, kuzodingeka uqale ujoyine inhlangano. Vakashela iwcamembers.org ukujoyina inhlangano.
Ubulungu babafundi ngu- $ 15.
Ubulungu bobuchwepheshe ngu- $ 50.
Ngoba iseshini yethu yamalungu amaningi ibaluleke kakhulu kuma-WPA, simema izikhungo ezingama-WPA ezingabhali ukuthi zijoyine inhlangano ngezinga lobulungu babafundi ($ 15) lobulungu bosuku olulodwa lokuya ku-Collaborative. Ngemuva kokujoyina, bazodinga ukubhalisela umcimbi ngezinga lobuchwepheshe ($ 15).
I-Plenary Session ngu-Courtney Adama Wooten, uJacob Babb, uKristi Murray Costello, noKate Navickas, abahleli be- Izinto Esizithwalayo: Amasu Okubona Nokuxoxisana Ngezisebenzi Ezingokomzwelo kuHlelo Lokulawulwa Kwezinhlelo
Izihlalo: UDkt Genie Giaimo, Middlebury College, kanye UYanar Hashlamon, E-Ohio State University
Theme: Izindawo Zokuxhumana Emsebenzini Wesikhungo Sokubhala
Ngomqondo ofanele, izindawo zokuxhumana ziyizikhala lapho sithola ukuvumelana nokujwayelekile phakathi kokungafani. Eqinisweni, sihlose kodwa mhlawumbe singazitholi. Phakathi kokuhlukumezeka kwamanje okutholwa abafuduki esimweni sethu sezepolitiki, kubalulekile ukuqaphela ukuthi izikhala zokukhula kanye nethuba labanye yizikhala zokuxhashazwa nokuvalelwa ngaphandle kwabanye. Umhlaba weqembu elilodwa wamathuba ukuphucwa elinye.
Ukugcina lokhu engqondweni, siphakamisa ukuthi izindawo zokuxhumana ziyindlela efanelekile yokuhlola ukungezwani emsebenzini wesikhungo sokubhala kanye nomqondo. Izindawo zokuxhumana “yizindawo zomphakathi lapho amasiko ahlangana khona, angqubuzana khona, futhi aphikisane, ngokuvamile ezimeni zobudlelwano bamandla obungenakulinganiswa” (Pratt 607). Emsebenzini weSikhungo Sokubhala, izindawo zokuxhumana zisetshenziswe yizingcweti eziningi kule minyaka engamashumi amabili edlule, kwafakwa izikhungo ngokwazo njengezifunda “zemingcele,” noma izilimi, amasiko namasiko ahlukahlukene (iSeverino 1994; iBezet 2003; iSloan 2004; iMonty 2016 ). Ezinye izifundiswa zakha izikhungo zokubhala njengezindawo zokuxhumana ezibucayi nezangemva kwamakholoni zababhali ababhekelwe eceleni ukuze bazimise maqondana nezinkulumo ezivelele (iBawarshi nePelkowski 1999; iWolff 2000; uKayini 2011). URomeo García (2017) ubhala ukuthi izindawo zokuxhumana zeSikhungo Sokubhala zivame ukwethulwa njenge-static futhi zimele ukungalingani njengezingxabano ezilungisiwe noma zomlando okufanele zixazululwe noma zifakwe (49). Ukwakha izikhala eziningi nje, kudingeka sihlole ukungezwani emsebenzini wethu futhi sibhekane nezindawo zokuxhumana njengezishintshayo nezisekelwe ngokomlando. Imilando kanye nezikhala zokungabi nabulungisa zisibhekisa ekutheni indlela izikhungo ezisebenza ngayo kanye nokuba nenkinga kubumba kanjani umsebenzi wethu; ukuthi ukuzijayeza nethiyori kungangqubuzana kanjani emsebenzini wethu; ukuthi abasebenzi kanye namakhasimende ethu asengozini enkulu bathola kanjani izikhungo zokubhala kanye nesikhungo sokubhala; nokuthi izakhiwo zenhlangano zikuthinta kanjani ukubandakanyeka kokuziphatha okuhle ekubhaleni isikhungo semfundo. Ngamanye amagama, kufanele sicabangele ukuthi izindawo zokuxhumana ezingaphakathi nezindawo zokubhalela ezizungezile, njengezikhungo ezibanzi, uHulumeni, uhulumeni, nezinye izinhlaka zamandla ziyithinta kanjani imisebenzi yethu nokwenza kwethu.